Indlwana emangalisayo ye-Hope Valley - inja inobungane! - I-Airbnb
Indlwana emangalisayo ye-Hope Valley - inja inobungane!
Bamford, England, i-United Kingdom
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Rebecca
I-Old Post Office Row Cottage iyindlwana ekhangayo, ephakathi nendawo, eyakhiwe ngamatshe e-Derbyshire edolobhaneni elithandwayo le-Peak District yase-Bamford. Ukuziqhayisa ngengadi enhle, evalekile, engemuva legceke kanye nokuziqhenya kwezinkuni endaweni yomlilo ye-gritstone, indlwana yethu iyindawo enhle kakhulu yabahamba ngezinyawo, imindeni noma abagibeli bamabhayisekili unyaka wonke.
Ungasebenzisa ikhaya ngokugcwele kuhlanganise negumbi lokuphumula elinesitsha sokungena ngemvume, i-diner enkulu yekhishi enehhavini elihlukahlukene, igumbi lokugezela elineshawa ye-cubicle, amakamelo okulala amabili angu-2. Le ndlu ifanele umndeni futhi indlwana yokuhamba iyatholakala uma icelwa. Uzoba nengadi yakho yegceke enendawo yokuhlala lapho kuhlehliswa khona - ngaphesheya kwamagquma aqhakazile esigodini sethemba. Emgwaqweni ukupaka emagcekeni ambalwa nje phansi kwegquma. Isiteshi sesitimela sihamba ngemizuzu engu-5 ngezitimela ezivamile eziya e-Sheffield noma e-Manchester.
4.77 · 81 okushiwo abanye
isenhliziyweni ye-Peak District National Park, idolobhana linikeza ukubukeka okuhle ngaphesheya kwe-Hope Valley, futhi uzungezwe izindawo eziningi ezizungeze izindawo ezinhle zasemaphandleni. Amagceke ambalwa nje phezulu egqumeni yindawo yokuphuza utshwala kanye ne-cafe yomphakathi enikeza ukudla okumnandi neziphuzo futhi isimo sihle kakhulu. Ukwehluleka lokhu kuvuliwe kunenketho enkulu yamaphabhu ahamba phambili nezindawo zokudlela amamayela angu-1 nje phansi komgwaqo e-Hathersage. Umfula i-Derwent uqhele ngamamayela angaba nguhhafu nokuyinto efanele ukuvakashelwa. Le ndlu ilungele abantu abahamba ngezinyawo noma abagibeli bamabhayisekili abanezindlela ezinhle ezisemnyango!
Ngishaya ucingo ukuze ngisize nganoma yimiphi imibuzo noma izinkinga ongase ube nazo!
Hlola ezinye izinketho ezise- Bamford namaphethelo